बासेल र ज्यूरिच एयरपोर्टमा पठाउनुहोस् वा स्विट्जरल्याण्ड-विस्तृत सेवा
हवाई अड्डा ट्राफिक बेसेल
हवाई अड्डा ट्राफिक ज्यूरिख
लिमोसिन सेवा बेसल
लिमोसिन सेवा WEF डेविस
लिमोसिन सेवा आर्ट बेसल
टैक्सी बासेल हवाई अड्डा
कार सेवा WEF डेविस
बेसेल हवाई अड्डा स्थानांतरण
सेवा बासेल ट्रांसफर, तपाईंको शटल सेवा बासेल र ज्यूरिचको हवाईअड्डाबाट वा। स्विट्जरल्याण्ड गरेको।
उचित मूल्यहरूको ग्यारेन्टी, हामीलाई दायित्व बिना कल गर्नुहोस् वा बस तल हाम्रो सम्पर्क फारम प्रयोग गर्नुहोस्।
अब अर्डर गर्नुहोस् र सवारी पछि तिर्नुहोस्।
INQUIRY / क्रम
(हामी 1 घण्टा भित्र जवाफ दिनेछौं।)
के तपाईं बासेल वा ज्यूरिचमा हवाईअन्तर्गत स्थानान्तरण खोज्दै हुनुहुन्छ? त्यसोभए हामी तपाईबाट सुनेका छौं।
हामी हाम्रो लिमोसिन सेवाको महान आवागमनको राम्रो भावना संग एक विश्वसनीय टैक्सी सेवाको सान्त्वना जोड्दछौं।
हामी खुसीसाथ सामान सहित बासेल एयरपोर्ट वा स्विट्जरल्याण्डमा कुनै अन्य स्थान सहित ड्राइव गर्नेछौं। तपाईलाई स्वागत छ तपाईलाई सम्पर्क फारम तपाईंको व्यक्तिगत चाहानुहुन्छ।
उदाहरण को लागि बासेल सिटी एअरपोर्ट बासेल Chf 40.-
बासेल र ज्यूरिचका लागि प्रथम श्रेणी र किफायती विमानस्थल स्थानान्तरण
हवाई अड्डा बासेलमा हाम्रो एयरपोर्ट ट्राफिक सेवा तपाईंलाई छिटो र सुरक्षित रूपमा तपाईंको विमान वा शहरमा फर्किन्छ। विशेषगरी हवाईअड्डामा यो प्रायः व्यस्त छ र नियमित रूपमा यात्रा गर्दै जान्छ, कसरी थाहा छ कि हवाई अड्डामा पार्किङ स्पेसको खोजी कसरी भयो। हामी टैक्सी कम्पनीहरू तपाईंको शटल ट्राफिक सेवाको साथ समाधानको लागि सान्त्वना र असुविधापूर्वक हवाईअड्डामा यात्रा व्यवस्थापन गर्नका लागि।
हवाईअड्डामा हवाईअड्डामा हवाई अड्डा ट्रांसफर
साथै, हामी तपाईंलाई स्विट्जरल्याण्ड र नजिकै फ्रान्स र जर्मनीमा अन्य ठाउँहरूमा पनि ड्राइभ गर्दछौं। यद्यपि बासेल हवाई जहाज ठूलो छ, यसले सधैँ इच्छित उडान जडान प्रस्ताव गर्दैन। यो एक छिमेकी एयरपोर्टबाट सुरू हुन सक्छ। हामी तपाईंलाई ज्यूरिख विमानस्थल वा छिमेकि देशलाई कुनै समस्या बिना ल्याउन सक्छौँ, उदाहरणका लागि एयरपोर्ट स्टटगार्ट वा युरोपेली हब फ्रैंकफर्ट एम मेन।
व्यक्तिगत यात्राहरूको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, चाहे तपाईं निजी यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ र स्विट्जरल्याण्डमा छुट्टै यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, वा व्यापारको लागि स्विट्जरल्याण्डमा व्यापारको लागि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ।
हाम्रो टैक्सी सेवा
तपाईं बासेलमा बस्नुहुन्छ र हाम्रो शटल ट्राफिक सेवा चाहानुहुन्छ हवाई अड्डा बासेल पुस्तक? कुनै समस्या छैन, हामी एक सानो ट्याक्सी बस मा7मान्छे सम्म एकै समयमा सामान सहित हवाईअसल बेसेल, ज्यूरिख, जिनेवा वा विदेश जाने। हामी तपाईंलाई तपाईंको हवाईअड्डामा सान्त्वना र पक्कै ल्याउँछौं।
यात्रीहरु र कम्पनीहरु को लागि सेवा
हामी ठूला कम्पनीहरूको परियोजनाहरू पनि हेर्छौं, तपाईंको कर्मचारीहरू बेसेलको होटलमा उदाहरणका लागि हुन् र उदाहरणका लागि अर्को शहरमा जान आवश्यक छ। ज्यूरिख, अथवा तपाईं नियमित रूपमा यात्रा गर्न र बासेलको भित्रै एकै मार्गमा यात्रा गर्ने छ। हामी स्विट्जरल्याण्डमा कर्पोरेट डोनरहरूको लागि र हवाईअन्तर्गत स्थानान्तरणका लागि यातायातमा तपाईंको योग्य साझेदार हुनुहुन्छ।
हामीलाई कल गर्नुहोस् वा हामीलाई हामीलाई एसएमएस पठाउनुहोस् र हामी प्रदान गरिएको निश्चित मूल्यहरूको लागि सोध्नुहोस्।
तपाईंको शटल ट्राफिक सेवा बेसेल।
स्थानान्तरण सेवा लाभहरू:
चाहे 1 व्यक्ति वा7व्यक्तिहरू, सँधै उस्तै कम मूल्य
सजिलो ज्यूरिख हवाई अड्डा, बासेल, जिनेभा र विदेश यात्रा
कुनै छुपा खर्चहरू, सबै निश्चित मूल्यहरू छैनन्
क्रेडिट कार्ड द्वारा भुक्तानी गर्दा कुनै शुल्क छैन
प्रतिस्पर्धी पार्टनर र सेवा
हामीलाई निम्न नम्बरमा कल गर्नुहोस्:
फोन: + 41 78 861 35 50
प्रतिलिपि अधिकार © 2018 , द्वारा प्रदान गरिएको WordPress, विषय: विशाल ThemeGrill.